१० वर्षभित्र युवालाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ - Aajavoli
१० वर्षभित्र युवालाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ
admin २८ पुष २०७३, बिहीबार January 28, 2017
नवीन्द्रराज जोशी, उद्योग मन्त्री
काठमाडौँबाट निर्वाचन जितेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ऐन कानुनको परिमार्जन, रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना, निजी क्षेत्रका बन्द उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्ने एवं १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजगारीजस्ता अभियानका कारण उद्योग क्षेत्रमा उत्साह, सिर्जना गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ– उद्योग क्षेत्रका समसामयिक पक्षहरूमा केन्द्रित रहेर गरिएको गर्नुभएको कुराकानी ।
अहिलेसम्मको आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले मन्त्रालयको काम सुरु गर्दा के कुरामा जोड दिनुभएको थियो र अहिले कहाँ पुग्नुभएको छ ?
त्यसका लागि के कदम चाल्नुभएको छ त ?
त्यसका लागि देशभित्र औद्योगिक वातावरण तयार पार्नु जरुरी छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छन् । त्यसैले हामीले ‘विशेष आर्थिक’ क्षेत्र ९सेज०, ‘औद्योगिक विकास ऐन’, कम्पनी ऐनजस्ता कतिपय ऐन निर्माण तथा संशोधन ग¥यौँ वा गर्ने चरणमा छौँ । त्यसपछि हामी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन पनि फेरि तयार पार्दै छौँ । यसरी ऐन, नियम र नीतिगत कुराहरूमा उद्यमीलाई ढुक्क बनाइदिने प्रयासमा छु । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको उत्तिकै सहयोगको खाँचो रहन्छ । आशा छ– सबै दलको यसमा समर्थन र सहयोग रहन्छ ।
यो समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायबारे मन्त्रलायले कसरी सोच्दै छ ?
हामीले गुणस्तरीय सामान उत्पादन ग¥यौँ भने हामीले हाम्रो ‘ट्रेड भ्यालु’ कायम राख्न सक्यौँ भने मूल्यको कुरा गौण हुन जान्छ । मानिसले ‘ब्रान्डेड’ सामान नै किन खोज्छन् रु’ नेपालले जस्तै गलैँचाको उत्पादनमा धेरै ‘कम्प्रोमाइज’ ग¥यो । त्यसैले त्यो पछाडि पर्दै गयो । तर, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गर्न सघाउ पु¥याउने विकल्पका बारेमा सरकार सचेत छ र सही विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न पनि तयार छ ।
जीर्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापनाको अभियानको कुरा गर्नुभएको छ, यो साँच्चै सम्भव छ कि राजनीतिक ‘नारा’ मात्र हो ?
नेपाल औषधि लिमिटेडका सम्बन्धमा हामीले अहिले अति आवश्यक औषधि उत्पादन गर्नेगरी पुनः सञ्चालन तयारी गरिरहेका छौँ । अहिले यस्ता औषधि करिब ७० प्रकारका छन् । सरकारले अहिले करिब रु। आठ अर्बको औषधि खरिद गर्छ । तीमध्ये हामीले यसको केही हिस्सा मात्र पनि ओगट्न सक्यौँ भने यो स्वतः सञ्चालन र स्थायित्वतिर जान सक्छ । मेरो धारणा सरकारले वितरण गर्ने अति आवश्यकीय औषधि आफैँले उत्पादन गरौँ भन्ने हो । सस्तो र गुणस्तरीय औषधि दिन सकियो भने सबैखालका उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
दीर्घकालसम्म व्यवस्थापन र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता र प्रभावकारी उत्पादन यस्ता उद्योगमा कायमै रहला त ?
यो प्रक्रिया कहिलेसम्म पूरा हुन्छ रु कुनै समयतालिका बनेको छ ?
यीबाहेक सम्भावना भएर पनि चल्न नसकेका निजी उद्योगबारे चाहिँ सरकारले के सोच्दै छ ?
लगानी सम्मेलनमा एक अर्ब डलर भित्र्याउने कुरा गर्नुभएको छ, यत्रो रकम भित्रिने सम्भावना छ र ?
लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर स्वदेशी उद्यमीले नै गुनासो गरिरहेको बेला विदेशीलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
दलहरूबीचमा यस्तो सहमति बनेको छ त ?
दस वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजगारी भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ, यसको प्राप्तिका लागि के–कस्तो रणनीति बनाउनुभएको छ र?
डेढ दशकभन्दा बढी सञ्चालनमा आएको मेडपको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ र?
तालिमपछि धेरैले व्यवसाय नै सुरु नगरेको र व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमीहरूका लागि पनि बजारीकरण समस्याको रूपमा रहेको गुनासो सुनिन्छ नि ?.
गोरखा पत्रबाट साभार
नेपालको पानी, जनताको लगानीमा २ अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्न इच्छुक
सेनाले दियो चेतावनी, निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा सम्झौता हुन्न
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भएको आरोप